ကျွန်ုပ်တို့၏ရေးအဖွဲ့ - Zhuji Feihu ချည်မျှင်စက် Co. ,, Ltd မှ
သင်ဒီမှာပါ : နေအိမ် >ကျွန်ုပ်တို့အကြောင်း >ကျွန်ုပ်တို့၏ရေးအဖွဲ့
Zhuji Feihu ချည်မျှင်စက် Co. ,, Ltd မှသုတေသနပေါင်းစပ်တဲ့ professional လုပ်ငန်းဖြစ်ပြီး, အထည်အလိပ်စက်ပစ္စည်း၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ထုတ်လုပ်မှု. ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး 1995, က Taozhu လမ်းတွင်တည်ရှိသည်, Zhuji စီးတီး, Zhejiang ပြည်နယ်,တရုတ်နိုင်ငံ,သည်အဘယ်မှာရှိသာ 1 ကီလိုမီတာကွာဟန်ကျိုး-Jinhua-Quzhou အဝေးပြေးလမ်းမကြီးထွက်ပေါက်ကနေ, Zhejiang-Jiangxi ရထားလမ်း Zhuji ဘူတာနှင့် Xiaoshan အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်ကနေ 50km, ဟန်ကျိုး. အကြောင်းကိုဖုံးအုပ် 15,000 ãŽ¡, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသစ်ကစက်ရုံကုမ္ပဏီ \_ 's သုတေသနဦးစီးဌာန၏အခြေစိုက်စခန်းဖြစ်ပါသည်, ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန, ထုတ်လုပ်မှုဌာန, နှင့်ပြီးနောက် - ရောင်းအားပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုဌာန.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီ၏ထုတ်ကုန်များအဓိကအားဖြင့်ကြိုးလိမ်စက်ပါဝင်သည်, အကွေ့အကောက်များသောစက်, ကြိုးတိုးချဲ့စက်, တည်ငြိမ်မှုခံစားနေရသောလူစုများကြားစက်နှင့်အခြားအထည်အလိပ်စက်တွေ Hanks.
သောကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရည်အသွေးမြင့်၏, ကျနော်တို့ကအထည်အလိပ်ကနေတညီတညွတ်တည်းလက်ခုပ်သံအနိုင်ရ, ဇာထိုးခြင်းနှင့်ကြိုးလုပ်ငန်းများ. ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန် Zhejiang အတွက်ပူ-ကိုရောင်းများမှာ, ရှန်ဟိုင်း, Jiangsu, ဂွမ်ဒေါင်း, ရှန်ဒေါင်း, ဖူ, Hebei , ဟူနန်အဖြစ်ဒါမှအပေါ်အရှေ့တောင်အာရှရှိနိုင်ငံများနှင့်. တစ်ဦးစကားပုံတရုတ်ဝင်ရှိပါတယ်: အထည်အလိပ်အရပ်၌, Feihu ချည်မျှင်စက်ရှိလိမ့်မည်.
"ရိုးသားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု Win-Win ရလဒ်များကိုဦးဆောင်" ၏စိတ်ကူးစှဲခွငျးအားဖွငျ့, စိတ်ချယုံကြည်ရတဲ့ "၏မူအရမွဲ, လက်တွေ့, ရှေ့ဆောင်, အသစ်တီထွင်ပြုလုပ်သော” နှင့်အရည်အသွေးပေါ်ရှင်သန် "၏သဘောတရားနှင့်အတူ, ဝန်ဆောင်မှုအပေါ်အကြွေး ", ကျနော်တို့အဟောင်းနှင့်အသစ်သမဝါယမနွေးနွေးထွေးထွေးကြိုဆိုပါတယ်နေကြတယ်. ကျနော်တို့အတူတကွပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံခြားစျေးကွက်ဖွင့်ဖွင့်လှစ်ဖို့သကဲ့သို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုပူးတွဲကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုအောင်ဖို့မျှော်လင့်.
နယ်ပယ်: နိုင်ငံတွင်း / ပို့ကုန်